Ukuphepha Komhlambi? | Martech Zone
Lwesibili, Disemba 30, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngithanda amahlaya kaGary Larson kusuka Uhlangothi Olude udumo:
Izinkampani kuthiwa zisengozini futhi sonke sinesimo sokuthi kukhona ngandlela thile ukuphepha ngezinombolo:
Sicela usinikeze izinkomba.
Sinikeze ngezifundo zesampula ezihambelana nomkhakha wethu, usayizi wenkampani, umkhiqizo, insizakalo, njll.
Sifunde le ndatshana kusuka [faka inkampani enkulu] enikeza umbono ophikisayo, ngicela uchaze.
Ake sibheke izibonelo zomhlambi, nokuthi ngubani ebesilokhu simlandela iminyaka:
Abasebenzi be-United Auto
I-Bancorp yesihlanu yesithathu
Iqembu Lezinsizakalo Zezezimali lePNC
Uhulumeni wase-United States
Cha ngiyabonga, ngeke ngilandele umhlambi noma nini kungekudala.
Dec 31, 2008 ku-11: 03 AM
Ingabe imithombo yezokuxhumana akuyona nje umhlambi osebenza kahle? Ngingavuma ukuthi ukulandela umhlambi uqobo, akuyona into enhle ongayenza, kepha kuningi okungashiwo ngemihlambi nedumela. Umhlambi usitshela ukuthi iGoogle yinjini yokusesha enhle, futhi ngiyavuma ukuthi ngiyilandele leyo. Ngokufanayo, umhlambi ukhomba imikhiqizo ukuthi ijabule nge- (Apple) futhi ayijabuli nge- (GM, Ford).
Umbuzo uthi, asijabule yini ngokulandela umhlambi, noma kungazelelwe sishiyeke sizizwa sikhohlisiwe lapho umhlambi ushiya obekulandela? Izibonelo eziningi ezingenhla lapho zilandelwa khona ngobuningi ngumhlambi, kepha manje sezishiywa ngobuningi yilowo mhlambi.
Dec 31, 2008 ngo-2: 29 PM
Empeleni, angicabangi ukuthi imithombo yezokuxhumana iwumhlambi osebenza kahle - sonke sisabalele emiphakathini yethu ezimele (yize ixhunyiwe) - amabhulogi, i-twitter, ukubhukimakhi kwezenhlalo, ubungane, amanethiwekhi we-Ning, i-Linked In, i-Plaxo…. Ngicabanga ukuthi abantu empeleni bacela ukwakha imiphakathi emincane kakhulu 'emincane' lapho bethola khona abantu abanokuthanda okufanayo, izinkolelo, imfundo, amathalente, ukuzilibazisa nezizinda.
IGoogle empeleni isika imiphumela isuselwa ekuhlobaneni, amagama ahluke kakhulu - “okushibhile” uma kuqhathaniswa “nezindleko eziphansi” kunganikeza imiphumela ehluke ngokuphelele kumuntu onenhloso efanayo yokusesha… ngokususelwa ekusesheni 'kokuthanda' kwabanye abantu nangezixhumanisi ezingemuva ezivela kweminye imithombo. I-Google mhlawumbe yinkosi ethe xaxa yemiphumela engeyona eyomhlambi encwadini yami.
Ngiyavumelana nombono wakho womhlambi. Ngiyethemba nje ukuthi abantu abasalandeli umhlambi ngokungaboni… Angisathengiselwa ukuthi imiphumela ivame ukuba mihle kunaleyo engemihle. Ngiyabathanda abantu ababuza okujwayelekile bese bephusha imvilophu.